Madaxweyne Xasan Sheekh “Wararka beryahan ay isla dhex-marayeen qalabka warbaahinta ee ahaa..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh “Wararka beryahan ay isla dhex-marayeen qalabka warbaahinta ee ahaa..”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda ay sameyneyso dadaal kasta oo lagu xaqiijinayo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran dalka India dib dalka loogu soo celiyo.
“Waxaan ku bogaadinayaa Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya iyo safaaraddeena aan ku leenahay magaalada Delhi oo iyagoo kaashanaya qareenada u doodaya maxaabiista si fiican u gudagaley kiiska wiilashan xiran’’.
Madaxweynaha ayaa beeniyay warar shacabka lagu marin habaabinayo oo beryahan warbaahinta ku soo noqnoqday.
“Wararka beryahan ay isla dhex-marayeen qalabka warbaahinta ee ahaa inay jiraan in 50 Soomaali ah oo xukun dil ah lagu riday waa kuwo been abuur ah, dadka ayaana lagu jahwareerinayey. Sida ay safaaraddeena iyo qareenada inoo xaqiijiyeen dembiyada raggan Soomaalida ah lagu haysto kuma jirto wax ay ciqaab dil ah ku muteysan karaan. Waxaana rajeynayaa in dadaalada socda ay mar dhow mira dhali doonaan’’, ayuu yiri Madaxweynaha.